မိုဘိုင်းဂိမ်းအညွှန်း - Assassin’s Creed Rebellion | MyTech Myanmar
မိုဘိုင်းဂိမ်းအညွှန်း – Assassin’s Creed Rebellion
Assassin’s Creed ဆိုတာ တော်ရုံဂိမ်းမဆော့တဲ့ လူငယ်တွေတောင် ကြားဖူးနေမယ့် Ubisoft ရဲ့ နာမည်ကျော် ဂိမ်းစီးရီးပါ။ ဥရောပတိုက်ရဲ့ အလယ်ခေတ်မှာ ထူးခြားတဲ့ လက်နက်ကိရိယာတွေနဲ့ လူသားတွေ အကျိုးအတွက် အမှောင်ထဲက စောင့်ကြည့်နေတဲ့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးသမားတွေနဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ “Apple of Eden” ဆိုတဲ့ အရာဝတ္ထု၊ ဒီဘက်မော်ဒန်ခေတ်ကနေ အဆိုပါ Assassin တွေရဲ့ DNA ကို သူတို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် တွေဆီကနေ ပြန်အခြေခံပြီး ဟိုးအတိတ်ကာလမှ မှတ်ဥာဏ်တွေကို ပြန်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ Animus စက်ကြီး စတာတွေဟာ AC ဂိမ်းစီးရီးရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလကုန်မှ ထွက်လာတဲ့ Assassin’s Creed Rebellion ကတော့ သူ့အရင်ထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ AC ဂိမ်းတွေနဲ့ မတူဘဲ တမျိုးတဖုံ ထူးခြားနေတဲ့ မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုပါ။
Apple of Eden ကို အတ္တအတွက် အသုံးချမယ့် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို အနှောင့်အယှက် ပေးရတာဟာလည်း Assassin တွေရဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီတစ်ခါတော့ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ အာဏာပိုင်တွေထဲက Apple of Eden ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာတာကို စပိန် Brotherhood အဖွဲ့ဝင် Aguila မှတားဆီးဖို့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Gameplay စတိုင်ကတော့ Strategy-RPG ဂိမ်းပါ။ Aguila ကနေ စတင်ကစားရပေမယ့် အက်ရှင်ဂိမ်း မဟုတ်ဘဲ အခြား Brotherhood အဖွဲ့ဝင်လေးဆယ်ကျော်ကိုလည်း မိုဘိုင်း RPG စတိုင် Recruit လုပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် သုံးယောက်တစ်ဖွဲ့စီ ဖွဲ့ပြီး Mission တွေလုပ်တာ၊ လျှို့ဝှက်ဌာနချုပ်ကို တည်ဆောက်တာ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် လက်နက်ကိရိယာတွေ ဖန်တီးပေးတာ စသဖြင့် လုပ်ပေးရမှာပါ။
Headquarter ဆောက်တာကလည်း အဓိက အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး ကိုယ့် Assassin တွေကို Level တက်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတာ၊ Resource တွေကို Weapon / Gear တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲတာ စသဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ မိုဘိုင်း RPG ပုံစံ ဇာတ်လမ်းသွားအဆင့်တစ်ခုကို နိုင်ရင် ပစ္စည်းတွေရတာ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေ ရဖို့ Shard တွေလိုက်စုရတာတွေ ပါဝင်ပေမယ့် Mission တွေထဲမှာတော့ Assassin’s Creed ပုံစံ လုပ်ကြံရေး၊ လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mission တစ်ခုအတွက် ဟီးရိုးသုံးကောင် ရွေးရမယ်။ Role မတူရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ကာယအားသုံးပြီး ရန်သူတွေကို ထိပ်တိုက်ချတာ၊ သော့တုဖွင့်နိုင်ပြီး ထောင်ချောက်တွေ ဖယ်ရှားနိုင်တာ၊ ပုံမှန် Assassin တွေလို ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးသွားလာရင်း လိုအပ်ရင် တိတ်တဆိတ်လုပ်ကြံတာ စသဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က Role မတူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် Hero တွေကို Upgrade တင်ရင် Role ကိုအဓိကကြည့်ပြီး တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအားလုံးက Chance နဲ့ဖြစ်ပြီး Level မြင့်ရင် အောင်မြင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများတယ်။
ဂရပ်ဖစ်ကတော့ ပုံတွေမှာ တွေ့တဲ့အတိုင်း Chibi စတိုင် အန်နီမေးရှင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ် ဆော့ကြည့်ရင် တော်တော်ဆော့လို့ ကောင်းပြီး မျက်စိပသာဒ ဖြစ်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားပုံကို သေသေချာချာ ဖန်တီးထားတာ၊ အရမ်း Realistic ဆန်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ အန်နီမေးရှင်းပုံစံထဲမှာပဲ Assassin’s Creed ကာတွန်းကား ကြည့်နေရသလို ဖြစ်နေအောင် သူတို့ရဲ့ အမှတ်အသား လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထည့်ထားတာတွေကြောင့်လည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ ကွန်ဆိုးဂိမ်းစက်တွေက အစစ်အမှန်ဆန်တဲ့ စတိုင်နဲ့တော့ မတူဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် မိုဘိုင်း Strategy ဂိမ်းဆိုတော့ သူ့ရဲ့ပုံစံက အနေတော်ပါပဲ။
Ubisoft ကတော့ မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုလည်း အစောတည်းက မျက်စိကျနေတဲ့ ဂိမ်းကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ Assassin’s Creed ဂိမ်းတွေကို ကတ်ဂိမ်းလိုရော၊ အက်ရှင်ပုံစံရော Gameplay မျိုးစုံ ပစ်ထည့်ပြီး စမ်းသပ်နေကြပါ။ AC Rebellion ဟာလည်း ဒီလိုထုတ်ကုန် တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပြောင်းလဲထားတဲ့ ဂရပ်ဖစ်နဲ့ Gameplay တို့က ဆော့ပျော်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် Brotherhood အဖွဲ့ဝင်တွေကို စုစည်းပြီး အလယ်ခေတ် စပိန်နိုင်ငံနောက်ခံ ကိုယ်ပိုင် Brotherhood အဖွဲ့ကြီး တည်ထောင်ရတဲ့ ဖီလင်ကိုတော့ ရစေပါတယ်။ မိုဘိုင်း RPG ဂိမ်းဆော့နေကြလူတွေတောင် ဒီဂိမ်းကို Tutorial လေးတော့ ဖြတ်သန်းပြီး ဆော့သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Android / iOS နှစ်ခုလုံးမှာ အခမဲ့ Freemium ဖြစ်တဲ့အတွက် အေးအေးဆေးဆေး စမ်းဆော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Assassin’s Creed ဆိုတာ တျောရုံဂိမျးမဆော့တဲ့ လူငယျတှတေောငျ ကွားဖူးနမေယျ့ Ubisoft ရဲ့ နာမညျကြျော ဂိမျးစီးရီးပါ။ ဥရောပတိုကျရဲ့ အလယျခတျေမှာ ထူးခွားတဲ့ လကျနကျကိရိယာတှနေဲ့ လူသားတှေ အကြိုးအတှကျ အမှောငျထဲက စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ လုပျကွံသတျဖွတျရေးသမားတှနေဲ့ ဒဏ်ဍာရီဆနျတဲ့ “Apple of Eden” ဆိုတဲ့ အရာဝတ်ထု၊ ဒီဘကျမျောဒနျခတျေကနေ အဆိုပါ Assassin တှရေဲ့ DNA ကို သူတို့ရဲ့ မြိုးဆကျသဈ တှဆေီကနေ ပွနျအခွခေံပွီး ဟိုးအတိတျကာလမှ မှတျဉာဏျတှကေို ပွနျဖျောထုတျနိုငျတဲ့ Animus စကျကွီး စတာတှဟော AC ဂိမျးစီးရီးရဲ့ အဓိက အစိတျအပိုငျးတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၈ နိုဝငျဘာလကုနျမှ ထှကျလာတဲ့ Assassin’s Creed Rebellion ကတော့ သူ့အရငျထှကျခဲ့ဖူးတဲ့ AC ဂိမျးတှနေဲ့ မတူဘဲ တမြိုးတဖုံ ထူးခွားနတေဲ့ မိုဘိုငျးဂိမျးတဈခုပါ။
Apple of Eden ကို အတ်တအတှကျ အသုံးခမြယျ့ အာဏာပိုငျ အဖှဲ့အစညျးတှကေို အနှောငျ့အယှကျ ပေးရတာဟာလညျး Assassin တှရေဲ့ အလုပျတဈခုပါပဲ။ ဒီတဈခါတော့ စပိနျနိုငျငံရဲ့ အာဏာပိုငျတှထေဲက Apple of Eden ကို ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့ ကွိုးစားလာတာကို စပိနျ Brotherhood အဖှဲ့ဝငျ Aguila မှတားဆီးဖို့ ကွိုးစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Gameplay စတိုငျကတော့ Strategy-RPG ဂိမျးပါ။ Aguila ကနေ စတငျကစားရပမေယျ့ အကျရှငျဂိမျး မဟုတျဘဲ အခွား Brotherhood အဖှဲ့ဝငျလေးဆယျကြျောကိုလညျး မိုဘိုငျး RPG စတိုငျ Recruit လုပျရမှာ ဖွဈတယျ။ ပွီးရငျ သုံးယောကျတဈဖှဲ့စီ ဖှဲ့ပွီး Mission တှလေုပျတာ၊ လြှို့ဝှကျဌာနခြုပျကို တညျဆောကျတာ၊ အဖှဲ့ဝငျတှအေတှကျ လကျနကျကိရိယာတှေ ဖနျတီးပေးတာ စသဖွငျ့ လုပျပေးရမှာပါ။
Headquarter ဆောကျတာကလညျး အဓိက အစိတျအပိုငျး ဖွဈပွီး ကိုယျ့ Assassin တှကေို Level တကျအောငျ လကေ့ငျြ့ပေးတာ၊ Resource တှကေို Weapon / Gear တှအေဖွဈ ပွောငျးလဲတာ စသဖွငျ့ ပွုလုပျပေးနိုငျတယျ။ မိုဘိုငျး RPG ပုံစံ ဇာတျလမျးသှားအဆငျ့တဈခုကို နိုငျရငျ ပစ်စညျးတှရေတာ၊ အဖှဲ့ဝငျတှေ ရဖို့ Shard တှလေိုကျစုရတာတှေ ပါဝငျပမေယျ့ Mission တှထေဲမှာတော့ Assassin’s Creed ပုံစံ လုပျကွံရေး၊ လြှို့ဝှကျစဈဆငျရေးတှနေဲ့ ကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Mission တဈခုအတှကျ ဟီးရိုးသုံးကောငျ ရှေးရမယျ။ Role မတူရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ကာယအားသုံးပွီး ရနျသူတှကေို ထိပျတိုကျခတြာ၊ သော့တုဖှငျ့နိုငျပွီး ထောငျခြောကျတှေ ဖယျရှားနိုငျတာ၊ ပုံမှနျ Assassin တှလေို ပုနျးလြှိုးကှယျလြှိုးသှားလာရငျး လိုအပျရငျ တိတျတဆိတျလုပျကွံတာ စသဖွငျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျက Role မတူပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ Hero တှကေို Upgrade တငျရငျ Role ကိုအဓိကကွညျ့ပွီး တငျရမှာဖွဈပါတယျ။ လုပျငနျးအားလုံးက Chance နဲ့ဖွဈပွီး Level မွငျ့ရငျ အောငျမွငျဖို့ ရာခိုငျနှုနျး ပိုမြားတယျ။
ဂရပျဖဈကတော့ ပုံတှမှော တှတေဲ့အတိုငျး Chibi စတိုငျ အနျနီမေးရှငျးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ ဆော့ကွညျ့ရငျ တျောတျောဆော့လို့ ကောငျးပွီး မကျြစိပသာဒ ဖွဈပါတယျ။ လှုပျရှားပုံကို သသေခြောခြာ ဖနျတီးထားတာ၊ အရမျး Realistic ဆနျဖို့ မကွိုးစားဘဲ အနျနီမေးရှငျးပုံစံထဲမှာပဲ Assassin’s Creed ကာတှနျးကား ကွညျ့နရေသလို ဖွဈနအေောငျ သူတို့ရဲ့ အမှတျအသား လှုပျရှားမှုတှကေို ထညျ့ထားတာတှကွေောငျ့လညျး ပါပါလိမျ့မယျ။ ကှနျပွူတာနဲ့ ကှနျဆိုးဂိမျးစကျတှကေ အစဈအမှနျဆနျတဲ့ စတိုငျနဲ့တော့ မတူဘူးပေါ့။ ဒါပမေယျ့ မိုဘိုငျး Strategy ဂိမျးဆိုတော့ သူ့ရဲ့ပုံစံက အနတေျောပါပဲ။
Ubisoft ကတော့ မိုဘိုငျးပလကျဖောငျးပျေါကိုလညျး အစောတညျးက မကျြစိကနြတေဲ့ ဂိမျးကုမ်ပဏီကွီး ဖွဈတဲ့အတှကျ သူ့ရဲ့ Assassin’s Creed ဂိမျးတှကေို ကတျဂိမျးလိုရော၊ အကျရှငျပုံစံရော Gameplay မြိုးစုံ ပဈထညျ့ပွီး စမျးသပျနကွေပါ။ AC Rebellion ဟာလညျး ဒီလိုထုတျကုနျ တဈခုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့ ပွောငျးလဲထားတဲ့ ဂရပျဖဈနဲ့ Gameplay တို့က ဆော့ပြျောပါတယျ။ အဓိကအားဖွငျ့ Brotherhood အဖှဲ့ဝငျတှကေို စုစညျးပွီး အလယျခတျေ စပိနျနိုငျငံနောကျခံ ကိုယျပိုငျ Brotherhood အဖှဲ့ကွီး တညျထောငျရတဲ့ ဖီလငျကိုတော့ ရစပေါတယျ။ မိုဘိုငျး RPG ဂိမျးဆော့နကွေလူတှတေောငျ ဒီဂိမျးကို Tutorial လေးတော့ ဖွတျသနျးပွီး ဆော့သငျ့တယျလို့ ထငျပါတယျ။ Android / iOS နှဈခုလုံးမှာ အခမဲ့ Freemium ဖွဈတဲ့အတှကျ အေးအေးဆေးဆေး စမျးဆော့ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
MyTech Myanmar2018-12-08T23:34:03+06:30December 8th, 2018|Games, Reviews|
Huawei P30 Lite က ၄သိန်း ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ ဈေးနဲ့ တန်လား ? (P30 Lite Review)
ငွေကျပ် ၂သိန်းအောက်သာရှိတဲ့ Honor 8A က ဘယ်လိုဖုန်းမျိူး ဖြစ်မလဲ ? (Honor 8A Review)